Ukuqeqesha ngokuShatshazwa ngokwesondo - iSiseko soMvuzo
Ikhaya Uqeqesho loKhuseleko loBucala
"Iikhokeli zoshishino kufuneka ziqinisekise ukuba zithatha inyathelo ekupheliseni ukuhlukunyezwa ngokwesini" kuchaza iKhomishini yoLingana neLungelo loLuntu.
... ukuba ukujonga rhoqo i-intanethi ye-intanethi ixhomekeke ngokukrakra ngokuziphatha ngokwesini kunye nokuziphatha kakubi? Ipesenti ezilishumi zabantu abadala e-UK bayavuma ukusebenzisa i-pornography ye-intanethi ye-intanethi emsebenzini. Ngokungafani nokukhathazeka kotywala okanye iziyobisi, ukuziphatha ngokunyanzelekileyo ngokwesondo kunzima ukubona kodwa iziphumo zayo azibi nakonakalisa. Amadoda aselula athatyelwa kakhulu ekusebenziseni ukunyanzeliswa kwaye, ngokunyuka, abafazi abaselula.
NgoDisemba i-2017, iKhomishana yokuLingana kunye neLungelo loLuntu (i-EHRC) yabhalela kwiihlalo ze-FTSE 100 kunye nezinye iinkampani ezinkulu ezichaza ukuba kuya kuthatha amanyathelo omthetho apho kukho ubungqina bokungaphumeli kwenkqubo, okanye ukujongana nokuhlukunyezwa ngokwesondo. Oku kwenzeke ekuphenduleni i-Hollywood ne-Westminster i-scandals yoxhatshazo ngokwesini, kunye nomkhankaso we #MeToo. Liye lacela ukuba banikele ubungqina bokuba:
Ziziphi izinto ezikhuselekileyo ezinokuthintela ukuxhatshazwa ngokwesondo
zithini amanyathelo abenzileyo ukuba baqinisekise ukuba bonke abasebenzi banakho ukubika iziganeko zokuhlukunyezwa ngaphandle kokwesaba ukubuyiswa
ukuba baceba ukuthintela njani ukuxhatshazwa kwixesha elizayo
Yonke inhlangano inobungozi kwimiba yokuhlukunyezwa ngokwesondo. Masikuncede ukuba uphendule ngokufanelekileyo ngokuphuhlisa indlela yokusebenza yabasebenzi bonke ukunciphisa umngcipheko. Senza iinkonzo zokukhusela umfanekiso wesidlangalaleni sakho kunye nabasebenzi kwindawo yokuziphatha ngokwesondo.
Iworkshop yosuku olupheleleyo lwempilo yomsebenzi kunye neengcali ze-HR kwimpembelelo ye-intanethi kwiimpilo yengqondo kunye nempilo. Kuye kwavunyelwa yiKholeji yaseRoyal ye-GPs.
Ikhosi yexesha lesigamu sabasebenzi be-HR kwimpembelelo ye-intanethi yezobuchopho kwimpilo yengqondo nangokwenyama, ukuhlukunyezwa ngokwesini, uxanduva lolwaphulo-mthetho kunye nomonakalo owenziwe ngokutsha. Abathathi-nxaxheba baya kufunda ngezifundo zophando kunye nophando malunga nokuba luphi uqeqesho olunokuthi lubekwe endaweni yokufaka isandla kwiinkampani zomthetho ekuthintela ukuxhatshazwa ngokwesondo kwixesha elizayo
Ii-workshops zemihla ngemihla okanye ezipheleleyo zeqela le-30-40 abaphathi kwiimpembelelo ze-intanethi kwiimpilo, ekuziphatheni kwindawo yokusebenzela, kwiimbopheleleko zobugebengu kunye nendlela yokwakha ukuzinza njengomlinganiselo wokuthintela ukulwa neengxaki zokuhlukunyezwa ngokwesini
Intetho ye-1 yehora yokuqala kunoma yintoni ubungakanani beqela elichazela impembelelo ye-intanethi yezobugcisa kwimpilo, ekuziphatheni kwindawo yokusebenzela, uxanduva lomntu olwaphulo-mthetho kunye nendlela yokwakha ukuzinza njengomlinganiselo wokuthintela.
Isiseko Semivuzo - Uthando, Ukwabelana ngesondo kunye ne-intanethi, ngumbutho wezemfundo owenziwa ngamazwe ngamazwe ohambisa iintetho kunye neendibano zocweyo kwiimpembelelo ze-intanethi kwiimpilo, ukufikelela, ubudlelwane kunye nobugebengu. Sivunywe yiKholeji yaseRoyal of General practitioners ukubonelela ngoqeqesho oluqhubekayo lophuhliso lobugcisa kule ndawo kubasebenzi bezempilo kunye nabanye abajongene nempilo yomqeshwa.
I-CEO yethu, uMary Sharpe, uMmeli, wenza umsebenzi kunye nomthetho wobugebengu kwaye unamava amaninzi ekuqeqesheni abasebenzi kumazwe kazwelonke nakwamanye amazwe. Kwiminyaka eyi-9 wafundisa abasebenzi kunye nabafundi kwiYunivesithi yaseCambridge ekuphuhlisweni kobukhokelo. Sisebenza kunye neentlobo zamaqabane kuquka abaqeqeshi be-HR kunye neengqondo zeengqondo.
Xa abantu beqaphela ukuba banokubangelwa izifo ezinxulumene nokusetyenziswa koonografi, bazimisele ngakumbi ukuthatha uxanduva lokutshintsha. Ukugxininisa uqeqesho kwizizathu ezingundoqo kuyisicwangciso esicwangcisekileyo sokuthintela okanye ukunciphisa ukuhlukunyezwa ngokwesondo esikhathini esizayo.
Ngolwazi olungakumbi qhagamshelana mary@rewardfoundation.org Ifowuni: + 44 (0) 7717 437 727
Ukuxhatshazwa ngokwesondo kwenzeka xa umntu eqhuba ukuziphatha okungafunekiyo kwimeko yesondo kunye nenjongo okanye isiphumo sokuphulwa kwesithunzi somntu okanye ukudala indawo esongelayo, enobushushu, ehlazo, ehlazo okanye ehlaselayo kubo.
'Ngokwezesondo' unokubamba ukuthetha, ukuthetha okanye ukuziphatha okubandakanya ukuqhubela phambili ngokwesondo, ukungathanga okungafanelekanga, iintlobo zokuhlaselwa ngokwesondo, iintlonelo zesini, ukubonisa iifoto zoonografi okanye imidwebo, okanye ukuthumela ii-imeyile ngezinto eziphathekayo ngokwesondo.